Google Lengs nwere akụkọ 3 na - enweghị atụ ị kwesịrị ịma | Gam akporosis
Atọ atọ dị egwu (otu abụghị nke Google Lens)
Google Lens bụ ngwa nke kawanye mma ebe ọ bụ na ọ na oru. Ọ bụ n'ụdị ọhụrụ ahụ ka akụkọ ọhụụ atọ dị ịtụnanya rutere ma nke ahụ ga-enyere ọtụtụ ndị na-ejikarị akwụkwọ anụ ahụ na dijitalụ aka.
Iji mepee ọnya, anyị ga-agwa gị otu n'ime ha na ọ bụ nke ahụ mere ka ọ ju anyị anya. Ugbu a ị ga-enwe ike iji igwefoto nke mkpanaka gị na Google Lens ka ọ dị nwee ederede ederede ma were ya na clipboard site na ngwaọrụ ọzọ. Eeh, otu ahụ ka ọ dị ma anyị nwere vidiyo ka ị nwee ike ịgba akaebe ya n'onwe gị.
1 Etu esi detuo ederede site na akwụkwọ na ihe edetu ka ị were gaa na ekwentị gị
2 Gwa ederede ederede site na ezigbo ederede
3 Chọọ gburugburu na - achọpụta nhọrọ ederede
Etu esi detuo ederede site na akwụkwọ na ihe edetu ka ị were gaa na ekwentị gị
Google gosipụtara ụbọchị ole na ole ozi kachasị mkpa nke Google Lens; ngwa ahụ jiri eziokwu gbaturu iji tụgharịa asụsụ ederede ozugbo ma obu gwa anyi ihe na ihe ahu bu. Ngwa ma ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ya, anyị na-akwado n'ihu ọha ka ị mee ya ugbu a.
Ihe omuma ohuru a bara ezigbo uru nye onye obula nke na ede akwukwo na dijital na ndu ha kwa ubochi. Dika nke nwere ihe edere ede, ugbua I nwere ike iwere ha na clipboard nke mkpanaka gi mgbe ị na-eji Google Lens.
Olee Lens na-eji nwere ezigbo teknụzụ nyocha ederede, ọ bụghị naanị ugbu a nwere ike were obere vidiyo nke mobile mana gaa na ngwaọrụ ọzọ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na laptọọpụ gị na mkpanaka gị, ịnwere ike iji nke a mara ederede ma were ya na desktọọpụ nke laptọọpụ ma si otú ahụ kpoo ya ozugbo.
Mbụ ị ga-ebupụta Google Lens
Nyochaa ederede ederede ma họrọ ederede achọrọ
Ugbu a, ị ga- pịa "Tapawa na kọmputa"
Họrọ ngwaọrụ nke tinyegoro Chrome
Ugbu a ị ga-enwe na laptọọpụ na Chrome ederede ezoro ezo ka ị nwee ike ịnyefe ya na akwụkwọ dị na Okwu ịchọrọ. Ọrụ ọhụrụ dị nnọọ anwansi nke Google Lens iji nọgide na-eju anyị anya na ikike o nwere.
Gwa ederede ederede site na ezigbo ederede
Nke a bụ nke abụọ na ọhụụ ọhụụ Google Lens ma ọ bara ezigbo uru. Isi ihe mere o ji dị ka ọ bụ iji kpọọ okwu. Ọ dị mma, dị mma. Ma ihe ọhụụ nke Lens bụ na ọ bụrụ na anyị nwere ike ịsụgharị ederede, ugbu a anyị nwekwara ike iji ya "Nụrụ" okwu dịka a na-akpọ ha.
Vidiyo na-ekerịta na-eme ka ọ pụta ìhè nke ọma ma yabụ anyị nwere ike ịmatakwu ụzọ ọpụpụ na ohere ọ nwere ike inye anyị. Ma mgbe anyị nwere ike iji ya maka otu paragraf ma ọ bụ otu ahịrịokwu, anyị nwekwara ike ịhọrọ okwu iji mata otu esi akpọ ya.
Cheedị echiche anyi na-amu bekee (echefula ngwa ndị a iji mụta asụsụ) anyị agụọla ọtụtụ akwụkwọ ndị mgbe ochie iji mee ka okwu anyị ka mma. Anyị bịarutere n’okwu anyị maara, mana anyị chọrọ ịmata etu esi akpọ ya. Anyị na-ebupụta Lens Google, nyochaa ederede ahụ, họrọ okwu ahụ, pịa bọtịnụ mkpọpụta na ime anwansi. Ọ na-agwa anyị okwu ahụ iji mee ka anyị nwee obi abụọ.
A magburu onwe akwụkwọ nkwado ngwa ọrụ ejiri n'aka nke ọma na maka usoro ọzọ nke ohere ị ga-amata otu esi eji uru.
Chọọ gburugburu na - achọpụta nhọrọ ederede
Nke ikpeazu, na ihe nwere ike ịbụ ihe ọhụụ na-atụghị n'anya, bụ ikike iji ihe ederede ederede ahọpụtara site na Google Lens maka nsonaazụ ọchụchọ. Na nnukwu ihe dị iche bụ na ọ bụrụ na tupu anyị ga-aga windo ọhụrụ Iji hụ nsonaazụ ya, ugbu a, mgbe anyị mere nhọrọ, anyị ga-ahụ otu panel mepee site n'okpuru na-egosi nsonaazụ ọchụchọ ndị metụtara ya.
Ihe na-adọrọ mmasị, ọ bụ ezie na ọ bụghị dị ka nke abụọ ndị ọzọ, ma nke na-etinye Google Lens na ntinye ịghọ ngwa nke ga - enye anyị ihe ịtụnanya ka ukwuu.
Google Lens rutere ọzọ na akụkọ atọ dị mkpa iji meziwanye ahụmịhe onye ọrụ ma si otú a nọgide na-enye nku na ahụmịhe ahụ dị elu nke anyị nwere site na igwefoto nke igwegharị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Atọ atọ dị egwu (otu abụghị nke Google Lens)
Pocophone F2 Pro: 6,67-inch ihuenyo, Snapdragon 865 na interface ya